Lvt zaphansi, SPC zaphansi, Wpc zaphansi - Iverson
Jiangyin Iverson Umhlobiso Material Co., Ltd. yasungulwa ngo 2005. Kuyinto ibhizinisi olunzulu zokuhlanganisa ukuthuthukiswa, ukukhiqiza kanye ukuhweba.
Inkampani yethu ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-16,000 nge-workshop yanamuhla kanye nendawo yokugcina impahla ehlanzekile.
Imikhiqizo Main yilezi: izinkuni plastic esiyinhlanganisela (WPC), itshe plastic esiyinhlanganisela (SPC), homogenous PVC ishidi flooring kanye izesekeli ahlobene njll
I-PVC flooring inemibala ehlukahlukene, njengokusanhlamvu kwamatshe, okusanhlamvu kwaphansi kwezinkuni, njll. Ukuthungwa kungokoqobo futhi kuhle. Ibhodi ngalinye lezinkuni lifakwe embossed, futhi ukuphrinta nokuthungwa kuhambelana nokwakha ukuthungwa kwangempela kwezinkuni nokubukeka. Ilungele izinhlobonhlobo zezitezi futhi isetshenziswa emakamelweni anezimoto eziningi, njengamagumbi okuhlala, amakhishi, izindlu zangasese, amakamelo okulala, amakamelo ezivakashi noma amasango nemigwaqo yokuheha izinhlamvu zamehlo. Ingafakwa kukhonkolo, amathayili, i-vinyl noma ukhuni, i ...
Iphansi le-PVC luhlobo olusha lwezinto zokuhlobisa phansi ezisetshenziswa kakhulu emazweni emhlabeni wonke namuhla. Idume kakhulu ezimakethe zase-Europe naseMelika kanye nasemakethe yase-Asia-Pacific, futhi futhi ithandwa kakhulu e-China, futhi amathemba ayo entuthuko abanzi kakhulu. Ubuso besitezi se-PVC bunobungqabavu obukhethekile obucutshungulwe obusezingeni eliphezulu obugqokiwe, futhi ungqimba olugqokile oluqinile olunemithi ekhethekile yokwelashwa luqinisekisa ngokuphelele ukumelana nokugqoka phansi ...
I-SPC Floor ingumkhiqizo wobuchwepheshe nokuhlakanipha. Inikeza ukuhlanganiswa kwezendlalelo eziningi, indawo yokumboza, ubumsulwa obuphezulu obusobala be-pvc yokugqoka, ifilimu ephrintiwe ephezulu, umgogodla we-SPC nephedi eyisimungulu. I-SPC imele i-'plastic plastic composite 'noma' stone polymer composite '. Ngokuqondile, i-limestone, eyinhlanganisela engaphili. Kuthatha ama-50-70% wokuqukethwe kwaphansi. Okunye yi-PVC ne-stabilizer. Vele isilinganiso sinqunywa yimenenja yokukhiqiza ngayinye eyenza i-d enkulu ...
I-SPC Flooring Rigid Core Interlocking Chofoza Khiya i-PVC Vinyl Flooring SPC isho ukwakheka kwepulasitiki ngamatshe.Ngomgogodla oqinile, yisizukulwane esisha sokumboza phansi, ezemvelo kakhulu, ezinzile futhi eziqinile kune-LVT.SPC floor isebenzisa i-PVC esezingeni eliphakeme kanye ne-powder yamatshe yemvelo ngokuchofoza Ilokhi elihlanganisiwe, elingafakwa kalula ezinhlotsheni ezahlukahlukene zesisekelo saphansi njengokukhonkolo noma i-ceramic noma u-flooring okhona njll. Lezi zinhlaka eziyi-100% zamabhodi ezinkuni ezingenamanzi zisebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bomswakama, ...
Ukuthuthukiswa kwemboni yamatshe epulasitiki yamatshe eChina sekuqale ukuvuthwa kancane kancane, kanti nomgwaqo wokwakhiwa kwesiko lomkhiqizo wezinkampani ezithile ezincane naphakathi nendawo nawo uthuthuka ngejubane elinzima. Ukwakhiwa kokuphathwa komkhiqizo, ukumaketha cha ...
Njengamanje, ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezinto zokwakha phansi, abantu abasagcini kumathayili aphansi. Ngaphezu kwamaphansi, phansi i-PVC kancane kancane iyakwazi ukuhlangabezana nezidingo zabathengi bezempilo yasemkhathini. Ukuthuthukiswa okugcwele kwe-PV ...
Iphansi lePulasitiki njengamanje liyinto entsha yobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme yokuvikela imvelo ezintweni zokwakha zomhlaba. Selokhu kwethulwa ifulethi lepulasitiki ezweni lethu, sekuphele iminyaka emihlanu noma eyisithupha yentuthuko. Kulindeleke ukuthi abambalwa abalandelayo ...